နားလည်ခြင်းဖြင့်အလှဆင်နိုင်စေ (ညီမလေးဖတ်ဖို့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » နားလည်ခြင်းဖြင့်အလှဆင်နိုင်စေ (ညီမလေးဖတ်ဖို့)
Posted by htet way on Apr 9, 2012 in Think Tank | 10 comments
ထက်ထက်မိုးဦးက သတင်းထောက်ပါးကိုရိုက်လိုက်တာ ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းညီမလေးကြားမှာပေါ့နော်။
တကယ့်ကိုပဲခံပြင်းစရာလို့ ညီမလေးကပြောလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ ပြစ်ဒဏ်ကိုထက်ထက်မိုးဦးခံစားလိုက်ရပြီလေ။
ပြစ်မူကင်းရှင်းကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ထက်ထက်တစ်ယောက်အပြစ်ရှိဖူးတယ်လို့ဆိုရမယ်။
ဒီလိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်က ပါးရိုက်လိုက်တယ်။အရိုက်ခံရတဲ့လူက မတိုင်ဘူးညီမလေးရေ၊ပါးရိုက်ခံရတာရှက်စရာပဲလေ
သူခမျာဘယ်လိုစိတ်ခံစားမူမျိုးဖြစ်နေမလဲလို့ အကို စာနာမိတယ်။တရားရုံးကို တက်ဖို့ သူမှာအားမရှိဘူးလေအင်အားက
စကားပြောတယ်ဆိုတာ သူနားလည်ပုံပေါက်တယ်ထင်ပါတယ်။အရိုက်ခံရတဲ့ကောင်လေးက ငြိမ်ခံရှာပါတယ်။ရိုက်သူကဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားပြီးနေရာတကာမှာပြောနေတာအကိုကြားတော့ အော်..စာနာမူ၊နားလည်မူ
ညီမလေးရေ ဘယ်တော့မှ အပေါ်စီးကရလဲတဖက်လူကိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့။နောက် စောစောက ပြောသလို စာသမားတွေ၊သတင်းသမားတွေနဲ့လည်း ပြဿနာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်။တချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကအကြောင်းတွေပြောလိမ့်မယ်
စာအဖြစ်တင်ပြလိမ့်မယ်။တခါကပေါ့ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်က စာသမားတစ်ယောက်ကို နိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။နောက်သူအဲ့
ဒီမြို့ကပြောင်းတော့ သူ့အကြောင်းတွေစာဖြစ်လာတယ်။သူသားစဉ်မြေးဆက် ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက် ခေါင်းမဖေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အမှန်တော့ ပြဿနာတစ်ခုဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လွန်ကြတာပါပဲ သည်းခံခြင်း နားလည်ခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်စေချင်တာပါ။
ညီမလေးရေ ကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတရားအတွက်အမြဲသတိရနေပါလို့အကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ကို
ကိုယ်ဒေါသကို သတိကပ်နိုင်မှလေ။ကိုယ်က သာမန်လူမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။
တဖက်လူစကားကိုလည်း နားမယောင်ပါနဲ့ညီမလေး။ တဖက်စကားကိုလည်းဆင်ခြင်မူမဲ့စွာပဲ လိုက်ပါစီးမျောမသွားပါနဲ့။
ကိစ္စတစ်ခုမှာ တဖက်စကားနားယောင်လိုက်ရင် ပြီးတဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် အမှားတစ်ခုဟာ
ကိုတော့ ဆင်ခြင်ပါနော်။ပွဲ့လန့်ပြီးဖျာခင်းတတ်တဲ့လူတွေထဲညီမလေးမပါစေနဲ့လို့ အကိုသတိပေးချင်ပါတယ်။အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ချင်ရင် အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။အများအကျိုးထမ်းရွက်တာကောင်းသလို စုပေါင်းလုပ်ရတဲ့အခါ သည်းခံနိုင်မှတော်ရုံကျတာပါ
စိတ်သဘောရင့်သန်မှဖြစ်မယ်ညီမလေး။စိတ်နုနေရင် သဘောထားသေးသိမ်နေရင် ညီမလေးတန်ဖိုးမဲ့မှာပေါ့
နေရာရမှ ဒီ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ဖြူစင်မူရှိနိုင်မလဲ။အရွေ့ဖြစ်ဖို့ အလုပ်စတဲ့အခါ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်
ကျရာတာဝန်ကျေပါစေကွယ်။ငါကတော့ ခေါင်းဆောင်ပဲဆိုပြီး ကိုယ်အတွေးနဲ့ ကိုယ်တဖက်လူကို သြဇာပေးအနိုင်ယူတာ ရွံ့ဖို့ကောင်းတယ်ညီမလေး။ဒီတော့ ညီမလေးဘယ်တော့မှ အနိုင်ကျင့်စိတ် မမွေးမိပါစေနဲ့ကွယ်။
တခါတုန်းက အကိုခရီးသွားတော့ ကားလက်မှတ်ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးကို ပိုက်ဆံရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကပြောဆိုနေတာအကိုတွေ့မိတယ်။
မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကနောက်ရောက်သွားလို့တဲ့။တကယ်တော့ ပေးထားတဲ့လက်မှတ်က ဆရာတော်ကြွလာလို့ နောက်ပေးလိုက်ရတာပါ။ဒါကို ဒီအမျိုးသမီးကြီးက ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောနေတာပါ။
ဆရာတော်နေရာကိုရောင်းတဲ့ လက်မှတ်ရောင်းမှားတာပါ။အဝေးပြေးကားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။သို့သော်လည်း နားလည်မူလေးနဲ့ ခရှီးဆက်ကြရင်ပျော်စရာပဲလေ။ကိုယ်လည်း ဘာသာတူတစ်ယောက်ပဲလေ။
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆို သူ့ယောက်ကျားအပေါ်သိပ်နားလည်တာတွေ့ဖူးတယ်။ပြန်ချိန်နောက်ကျနေရင် မအိပ်ဘဲစောင့်တယ်။တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ပြီးမှ အကို ဘာကြောင့်နောက်ကျတာလဲဟင်လို့ သာယာတဲ့အသံနဲ့မေးတယ်။ပြီးမှ
အမူးပြေမှ အေးအေးဆေးဆေးနားချပါတယ်။ဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ် အသံမာမာနဲ့ စကားမပြောဘူး။အမြဲတမ်းပဲသူ့
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ချစ်သူရီးစားတွေပါ။ သဲသဲဆိုတဲ့ ကလေးမလေးပါ ကိုမိုးဆိုတဲ့လူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်
ဖြစ်ချင်တော့ ကိုမိုးက သူ့ကွယ်ရာမှာချစ်သူတစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်။တစ်နေ့တော့ တွဲသွားတာ သဲသဲမျက်မြင်တွေ့ပါလေရော
သဲသဲက တစ်ချက်မျက်နှာမပျက်ဘူး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပဲနုတ်ဆက်ရှာပါတယ်။နှစ်ဦးတွေ့ကြတော့ သဲသဲမှာဆွဲဆောင်မူ စည်းရုံးနိုင်မူမရှိလို့ တဖက်ကို ယိမ်းသွားတာပါ။နောက်ကို မောင့်သဘောကျနေပါ့မယ် မောင်ချစ်အောင်နေမယ်နော်..မောင်။သဲသဲစိတ်မကောင်းပါဘူး
မဟုတ်ဘူးမောင် ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်ဖို့ တခြားလူကို စတေးတာမကောင်းသလို သူ့ခမျာစိတ်အနာတရဖြစ်သွားမယ် နာမည်ပျက်သွားမယ်။ဒါအရေးကြငီးဆုံးပဲမောင်..တဲ့။ ဘယ်လောက်အေးချမ်းကြသလဲညီမလေးရယ်။ ကိုမိုးနဲ့ သဲသဲမညားခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့်တစ်သက်လုံးကိုမိုးက သဲသဲကို သတိရ အမှတ်ရနေတယ်ညီမလေး။
နားလည်မူဟာအနုပညာပါ နားလည်စိတ်ရှိတဲ့လူဟာ အောင်မြင်တာပဲ နားလည်စိတ်ထားတတ်တဲ့လူဟာ့ လေးစားခြင်းကိုခံရတာပဲ။ဘ၀မှာနေရာရတာပါပဲညီမလေးရယ်။ဒါကြောင့် နားလည်စိတ်ကလေးနဲ့
လောကမှာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်မှာနားလည်စိတ်ကလေးနဲ့ နေထိုင်တတ်ရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲ
နားလည်မူအနုပညာနဲ့ အလှဆင်ပါလို့ အကိုပြောပါရစေကွယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ညီမလေးဖတ်ဖို့ဆောင်းပါးဟာ စာဖတ်သူတွေနဲ့
ကျွန်တော်အယူအဆ ဒဿနတွေဟာ ညံ့ဖျင်းနေခြင်းညဖစ်မှာပါ
ဒါကြောင့်ဝေဖန်ပါ အကြံပေးပါလို့ လေးစားစွာတင်ပြတောင်းဆိုပါတယ်။
Dear Ko Htet Way,
Very good idea on various point of views.
Let’s try our best for our mother land by understanding each others.
မှန်ပါတယ်ဆရာထက်။ မမှားပါဘူး။ ဆွေးနွေးဖို့တောင်တော်တော်ပြည့်စုံနေပြီမို့ လိုက်နာနိုင်အောင်ပဲကြိုးစား လိုက်ပါ့မယ်။ ဒီလိုလေးတွေထောက်ပြပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်မတို့တွေကအမြဲပဲဒေါသရှေ့ထားနေကြမိတယ်။ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။ လက်မတချောင်းထောင်သွားပါတယ်။
စစ်မှန်သောအေးချမ်းမှုရရှိမယ်ဆိုတာ အပြည့်အ၀ လက်ခံပါတယ်ဗျာ..
“အရွေ့ဖြစ်ဖို့ အလုပ်စတဲ့အခါ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ကျရာတာဝန်ကျေပါစေကွယ်။”
အပေါ်က စကားလေးကိုတော့ ကိုဂီဆီက မှတ်ထားမိတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ ထပ်တူမြင်မိလို့..နှစ်သက်ပါကြောင်း..
“အသင်းအဖွဲတိုင်းအတွက် ကျရာနေရာမှစွမ်းစွမ်းတမံ စွမ်းဆောင်ခြင်း..”
ကိုထက်ရေ ………. အရမ်းကောင်းတယ်ရှင် ကိုထက်ရဲ့စာကို ဖတ်ချိန်မှာ သမီးမှာ အဲလိုစိတ်ဓာတ် အဲလို အပြစ်တွေများရှိနေလား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိတယ် ………. ဘာပဲပြောပြောပါ သမီးသာ အမှားတွေရှိခဲ့ရင် ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဗျာ ………… လေးစားစွာဖြင့်
ဆရာSwal Taw Ywet
ဆရာမThel Nu Aye
ကျွန်တော်က ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မျက်မြင်လေးတွေကို ရေးပြတာပါ အားပေးတာကျေးဇူးပါ
ဆရာထက်ရေ …. ကျန်တဲ့ ကိစ္စအကြောင်းရာတွေတော့ ဆရာထက်နဲ့သဘောထားခြင်း တိုက်ဆိုင်ပေမယ့် … အောက်ဆုံးက …. အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်အကြောင်းကတော့ ….( ကျွန်မအတွက် ) လက်ခံရခက်ပါတယ် …. ။
အဲ့ဒီလို အမျိုးသမီးတွေ ရှိပါတယ် … ။ အရိုးကွဲအောင် ရိုက်မှ အသည်းစွဲအောင် ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား …. သူတို့တွေအတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့လေသလားပဲ … ။ သူလင် သူမယား ၊ သူတို့ ချစ်သူတွေကြား ဘယ်လို သဘောထားအပြန်လှန်ထား … ဒီလို သည်းခံနေခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်အချစ်ကို နားလည်လျှင်တော့ကောင်းတာပေါ့ .. နားမလည်ပဲ .. အနိုင်ရတိုင်း နိုင်စားနေမယ်ဆို … တိတ်တိတ်လေးကျန်ခဲ့ရမယ့် လူက ..ကိုယ်ပါပဲ …. ။ ကျွန်မတော့ .. အဲ့ဒီလိုမျိုး စိတ်ထဲ သိုဝှက်လို့ မရဘူး … တစ်ခုခုဆို ဒဲ့ရှင်းလိုက်ရမှ …. ။ မဟုတ်ရင် ရင်ထဲ နေလို့မကောင်းဘူး …. ။ သူ့နေရာနဲ့သူ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တာတော့ ရှိသင့်ပါတယ်လေ …. ။ (အမြဲတမ်းလျော့ပေးနေရလျှင်လည်း ..သူငြီးငွေ့သွားမယ် .. ) တခြားနည်းတွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ကြောင်း သဘောထားကြီးကြောင်းပြလို့ရပါသေးတယ်လို့ ကျွန်မမြင်မိပါတယ် …. ။
အင်း … ကိုဖေါကြီးနဲ့ စကားနိုင်သွားလုနေတာနဲ့ အခုမှပြန်ဝင်ဖြစ်တယ် ကိုထက်ဝေးရေ..။
ကိုယ်ကလဲ ပြန်ပြီး နားလည်ပေးရမှာတွေ ရှိနေမှာပါ။
ပြောသာပြောတာ – တကယ့်တကယ် မှာ
နားလည်မူဆိုတာ အင်မတန်ပြုရခက်တဲ့ အမူပဲဆရာ
ဆရာတို့ကတော့လောကစာမျက်နှာကို ကျွန်တော့်ထက်ပို ဖြတ်သန်း